Fuchsia OS iri kushanda parutsigiro rwekumhanyisa zvirongwa zvisina kugadziriswa zveLinux | Linux Vakapindwa muropa
Vagadziri veGoogle yakaburitswa mazuva mashoma apfuura chirongwa chekushandisa mashandiro ekumhanyisa mapurogiramu asina kuchinjika akarongedzerwa Linux pa Iyo inoshanda sisitimu Fuchsia.
Kumhanya zvirongwa zveLinux munzvimbo yemushandisi, zvakarongwa kupa "starnix" rukoko kutsigira Linux ABI. Muchikamu chakagadziridzwa, iyo Linux kernel system interfaces inoitwa mune mutyairi unovhurwa senzira yeiyo Fuchsia inoshanda sisitimu, iyo inomhanya munzvimbo yemushandisi uye inoshandura zvikumbiro kubva kuLinux zvirongwa kuita mafoni kune anoenderana Fuchsia subsystems.
Zvinoonekwa kutie panguva yekuvandudzwa kweprojekti, mazhinji masisitimu eFuchsia anofanirwa kuchinjwa kushandisa ese masisitimu masisitimu anowanikwa muLinux. Iyo dhizaini ye starnix yakanyanya kufanana neiyo Windows subsystem yeLinux iyo inoshandisa Windows kududzira Linux system inoshevedza kuWindows system mafoni.
Izvo zvakarongerwa kuita iyo starnix kodhi muRust kudzikisira iyo inogona kunetseka vectorss izvo zvinogona kushandiswa kukwidziridza iwo maropafadzo eiyo Linux maitiro kune iyo starnix maitiro.
Kuchengetedza kuchengetedzwa pa starnix, zvakajairika Fuchsia nzira dzekudzivirira dzinoshandiswa chero pazvinogoneka.
Semuenzaniso, kana uchinge wawana masevhisi sisitimu senge faira system, network stack, kana giraidhi subsystem, starnix inongoshandura zvikumbiro chete, ichishandura iyo Linux ABI kuenda kuFuchsia system ABI, ichibvumidza iwo iwo marambidziro sezvaanoiswa kune zvakajairwa Fuchsia maitiro.
Izvi zvakare zvichaita Linux-yakatarwa mvumo nzira, semuenzaniso kutsanangura mune mamiriro ezvinhu imwe Linux maitiro ane mvumo yekumisa imwe.
Vagadziri veFuchsia vakagadzira rutsigiro rwekutangisa zvishandiso zveLinux munguva yakapfuura, asi vakaedza kuita kunoshanda nekufananidza nenzira iyo Linux application kuvhura yakarongeka pane Chrome OS.
Zvekuenderana kweLinux, Fuchsia yakapa raibhurari yeMachina, iyo yaibvumira zvirongwa zveLinux kumhanya mune yakasarudzika yakasarudzika muchina wakagadzirwa uchishandisa hypervisor yakavakirwa paZircon kernel uye Virtio zvirevo.
Iko kushandiswa kwehunyanzvi hakubvisirwe kunze, sezvo kuzadzikiswa kuzere kweLinux system interface haisi basa risingakoshi.
Pamusoro pe starnix cape, zvinokwanisika kugadzira michina yekumhanyisa Linux zvinogoneka uchishandisa Linux kernel inomhanya mune yakasarudzika chaiyo muchina. Iyi nzira inoonekwa seyakareruka kuita, asi zvakare inoshandisa zviwanikwa.
Pane imwe nguva, Microsoft yakatanga kuvandudza yayo Linux inoenderana dura kubva kumuturikiri, asi yakazopedzisira yachinja kushandisa yechinyakare Linux kernel pane Windows Subsystem yeLinux 2.
Uyewo, Fuchsia inotopa POSIX Lite inoenderana dura iyo inomhanya pamusoro peFuchsia System ABI. POSIX Lite inokutendera kuti umhanye zvimwe zvirongwa zveLinux, asi zvinoda kudzorera kodhi yekushandisa uye, mune dzimwe nguva, kugadzirisa kodhi yekodhi.
Rimwe rematambudziko ine POSIX Lite iko kuita kusakwana kwemabasa ese ePOSIX, kusanganisira mafoni ekushandura mamiriro epasirese epasi rose (semuenzaniso, basa rekuuraya), izvo zvinopesana nepfungwa dzekuchengetedza muFuchsia, izvo zvinorambidza kushandura mamiriro epasirese epasi rose. Express.
Iko kushandiswa kwePOSIX Lite kunoruramiswa mukuita kwekuvhura mashandiro akavhurikas, asi haigadzirise matambudziko nekuvhura zvirongwa izvo zvisina kuwana kodhi (semuenzaniso, hazvigoneke kuzadzikiswa neApplication zvinoshandiswa zvine zvakanyorwa zvakabatanidzwa).
Ngatirangarirei kuti mukati megadziriro yeiyo Fuchsia chirongwa, Google iri kuvandudza sisitimu yekushanda yepasi rose inokwanisa kushanda pane chero rudzi rwechigadzirwa, kubva kumabasa uye mafoni kusvika kune yakadzamirwa uye tekinoroji yevatengi. Iko kuvandudza kunoenderana neruzivo rwekugadzira iyo Android chikuva uye inofunga nezvekukanganisa kuri mumunda wekuyera uye chengetedzo.
Iyo sisitimu yakavakirwa paZircon microkernel, zvichibva mukuvandudzwa kweprojekti yeLK, yakawedzerwa kuti ishandiswe mumakirasi akasiyana siyana emidziyo, anosanganisira mafoni nemakomputa emunhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Fuchsia OS iri kushanda parutsigiro rwekumhanyisa zvirongwa zvisina kugadziriswa zveLinux
Kali Linux 2021.1, yekutanga vhezheni yegore ine akagadziridzwa desktops uye idzi dzimwe nhau